Fitaovana fironana izay efa mamafa amin'ity vanim-potoana ity | Bezzia
Ireo kojakoja fironana efa mahomby
Susana godoy | 10/09/2021 10:00 | mameno
Misy plugins fototra ary avy eo ireo kojakoja fironana izay ho hitantsika isaky ny vanim-potoana. Saingy amin'ity tranga ity dia tavela amin'ny fararano sy ririnina isika 2021-2022 satria efa akaiky eo isika. Noho izany, tonga ny fotoana hahitana izay rehetra horaisina sy be dia be.
Indraindray tianay ny manaraka ny fombantsika fa tsy maninona ny mampifangaro azy miaraka amin'ny antsipiriany sasany momba ny fironana. Satria mifangaro miarahaba no ho tratra foana amin'ny fijerinay tsara indrindra. Raha te hahafantatra izay lazainay ianao dia aza hadino izay manaraka.
1 Ny kavina Maxi dia mbola fironana lehibe
2 Volom-borona hatrany an-tendany ka hatrany an-doha
3 Ny fehikibo dia anisan'ireo kojakoja fampiasa amin'ny lamaody
4 Kitapo misy famaranana mirandrana
Ny kavina Maxi dia mbola fironana lehibe
Ny kavina dia iray amin'ireo fototra lehibe amin'ny endrika manaja tena ary fantatsika izany. Noho izany, vonona foana izy ireo handao antsika amin'ny fomba samihafa arakaraka izay ilaintsika. Amin'ity taona ity ianao dia hanana izany mazava tsara, satria tsy misy zavatra tsy voamariky ny azy ireo, fa afaka mamela ny tenantsika ho entin'ny habe lehibe kokoa isika nefa tsy misy risika. SATRIA ny kavina maxi no kintana lehibe amin'ny fararano sy ririnina. Ny lehibe kokoa no tsara kokoa. Mazava ho azy, raha manontany tena ianao hoe karazana modely inona no ampidirinay amin'io habe io dia mazava ny anay. Satria ireo izay vita amin'ny fantsom-boasary makirana vitsivitsy no ho hita indrindra amin'ity vanim-potoana ity. Efa manana modely ao an-tsaina ve ianao? Ao Zara, ohatra, dia ahitanao azy ireo amin'ny loko sy endrika maro samihafa.
Volom-borona hatrany an-tendany ka hatrany an-doha
Toa mijery indray isika ary ny an'ny ny fanaovana saron-doha dia mampatsiahy antsika ny taona 60 izay nitondran'ny famenon-javatra toa an'io ny malaza. Ankehitriny ianao dia afaka mahatsapa ho kintana Hollywood noho ny kojakoja fampiasa amin'ny lamaody. Satria izy ireo ihany koa no hiaraka aminao amin'ny fitsangatsangananao. Azonao atao ny misafidy amin'ireo lamina sy loko isan-karazany atolotry ny orinasa, satria avelanay ho an'ny safidinao izany. Fa amin'ity indray mitoraka ity dia tsy ho hitantsika fotsiny hoe ahoana no anaovana ny sarondoha ho fehin-doha fa hosaronany ny loha iray manontolo hamatotra ny hatoka.
Ny fehikibo dia anisan'ireo kojakoja fampiasa amin'ny lamaody
Mazava ho azy, raha tsy miresaka afa-tsy ny fehikibo isika dia tsy zavatra hahagaga antsika izany satria efa fantatsika fa miaraka amintsika amin'ny endrika tsara indrindra izy ireo. Nefa tokony holazaina fa amin'ity tranga ity ireo izay manana habe lehibe kokoa dia mandeha matanjaka ihany koa. Eny, toa eo anelanelan'ny firavaka sy ny fehikibo, dia ho tanteraka tsy ho ela ny fisongadinana. Rehefa vita ny XXL dia ho tompon'andraikitra amin'ny fanomezana hazavana bebe kokoa amin'ny fombanao izy ireo, hamita azy amin'ny endrika sy loko nofidinao. Noho izany, azo antoka fa hahita ilay tadiavinao ianao, nefa tadidio fa aza adino izany. Na ny fehin-kibo na amin'ny rojo dia ny sasany amin'ireo hevitra lehibe miandry anao.
Kitapo misy famaranana mirandrana
Marina fa ny kitapo dia tsy afaka manadino ny datin'ny fararano. Satria rehefa miresaka momba ny kojakoja lamaody izahay dia tsy te-tsy hahita ilay fampisehoana koa. Saingy, na dia azontsika atao aza ny mitafy azy ireo amin'ny fomba samy hafa sy amin'ny loko hafa, dia misy antsipiriany iray izay hisongadina ambonin'ny hafa rehetra. Efa eo am-pamaranana io ary ireo izay manana kofehy no ho tompon'antoka amin'ity vanim-potoana vaovao ity. Toa tsy te hiala amin'ny fahavaratra isika ary hita ihany koa ireo fahavitana tamin'ny vanim-potoana fahavaratra. Ka mbola eo izy ireo ary matanjaka noho ny hatramin'izay. Safidio ihany koa ny fomba malalaka sy paosy satria hameno ny fararano vaovao tsy mbola nisy toy izany teo aloha ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » mameno » Ireo kojakoja fironana efa mahomby
Meal Prep, ny tombony azo amin'ny fandaminana ny menio isan-kerinandro
Fironana makiazy 4 ho an'ny fararano 2021